Devuan 3.0 Beowulf inosvika neDebian 10.4 base, Kernel 4.19 uye nezvimwe | Kubva kuLinux
Kutanga kwe iyo itsva vhezheni yekuparadzirwa kweLinux "Devuan 3.0 Beowulf" zvinova forogo yeDebian, asi inozivikanwa nekusava nehurongwa.
Bazi idzva rinozivikanwa nekushandurwa kuenda pasi peiyo Debian 10 "Buster" package, kunze kweizvozvo sechikamu cheprojekiti, shanduro dzemazana mazana mana eDebian mapakeji akagadzirwa uye akachinjwa kubvisa zvisungo zvehurongwa, rebrand kana kuchinjika kune zvimiro zveDevuan zvivakwa.
Mapakeji maviri (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) aripo chete muDevuan uye ane hukama nekumisikidzwa kwezviratidziro uye mashandiro eiyo kuvaka system. Zvikasadaro, Devuan anoteerera zvizere Debian uye inogona kushandiswa sehwaro hwekuvaka yakasarudzika Debian inovaka isina systemd.
Iyo default desktop inoenderana neXfce uye Slim yekuratidzira maneja, kunyange paine zvakare sarudzo yekuisa KDE, MATE, Cinnamon uye LXQt.
Panzvimbo pehurongwa, yechinyakare SysVinit yekutanga system inopihwa. Imwe sarudzo ndeye maitiro ekushanda pasina D-Bhazi yakapihwa, iyo inobvumidza kugadzirwa kwemashoma masisitimu edesktop zvichienderana nebhokisi dema, fluxbox, FVWM, FVWM-crystal uye Openbox mamaneja.
Kugadzirisa network, sarudzo ye NetworkManager yekumisikidza inofungidzirwa iyo isina kusungirwa kune systemd. Kugadzirisa mashandisiro evashandisi mu KDE, Cinnamon uye LXQt yakapa elogind, sarudzo logind, isina kubatana ne systemd. Kushandisa Xfce uye MATEconsolekit.
1 Chii chitsva muDevuan 3.0?
2 Dhawunirodha Devuan 3.0.0 Beowulf
3 Nzira yekukwiridzira kune Devuan 3.0 Beowulf kubva kuDevuan 2.x?
Chii chitsva muDevuan 3.0?
Mune iyi vhezheni itsva yekuparadzira, sezvambotaurwa pakutanga, hutsva hukuru ndihwo kutamira kune Debian 10's "Buster" package base (iwo mapakeji akawiriraniswa neiyo Debian vhezheni 10.4) uye pane iyo Linux kernel vhezheni 4.19 inopihwa.
Imwe yeshanduko inomira muDevuan 3.0 ndiyo akapatsanurana kumashure maitiro eudev uye elogind kutsiva monolithic system zvikamu zvine chekuita nekugadzirisa mafaera edhizaina mu / dev dhairekitori, kubata kubatana uye / kana kudamburwa kwemidziyo yekunze, uye kugadzirisa zvikamu zvevashandisi
Zvakare, mune iyi vhezheni itsva Tsigiro yemapc64el ekuvakisa yave kuwanikwa, kuwedzera kune akambotsigirwa mapuratifomu i386, amd64, armel, armhf, uye arm64.
Zvakare, tinogona kuwana nyowani screen maneja, pamwe kurodha kurongedza kwashandurwa uye theme yedesktop nyowani inokurudzirwa. Unogona kushandisa sarudzo runit system seimwe nzira kune / sbin / init uye shandisa iyo OpenRC yekutanga system seimwe nzira kune sysv-rc sevhisi uye inomhanya-nhanho kutonga.
Dhawunirodha Devuan 3.0.0 Beowulf
Kana iwe uchida kurodha pasi kugovera kweLinux iwe unofanirwa kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye muchikamu chayo chekurodha pasi iwe unogona kuwana iyo system mufananidzo kubva kune rimwe remagirazi aripo. Zviri nani kushandisa iri padyo newe, iyo chinongedzo ndeichi.
Nzira yekukwiridzira kune Devuan 3.0 Beowulf kubva kuDevuan 2.x?
Si Kana iwe uine Devuan vhezheni 2.x yakaiswa, iwe unogona kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni vhezheni pasina kuzodzosera iyo system.
Nokuda kweizvi iwe unofanirwa kuvhura terminal uye uite inotevera mirairo. Kutanga isu tiri kuzowedzera iyo Devuan 3.0 repositories kune edu masosi.list, iri munzira: /etc/apt/source.list
Isu tinoigadzirisa neyedu yakasarudzika edhita uye tinowedzera aya marekodhi (zvakakosha kuti utaure chero imwe dura ine # pakutanga kana kuibvisa kudzivirira matambudziko mududziro):
Isu tinochengetedza shanduko.
Pane iyo terminal tinogadzira yekuvandudza:
Uye isu tinonyora inotevera mirairo:
Uye pakupedzisira isu tinogadziridza iyo system ne:
Pano isu tichafanirwa kumirira sezvo ichatanga kurodha pasi ese mapakeji uye masisitimu anodikanwa ekuvandudza. Maitiro aya anonoka, saka mune terminal ipi maitiro acho anogona kushandiswa kuita rimwe basa apo komputa yako iri kugadziridzwa.
Pakupera iwe uchafanirwa kutangidza komputa yako kuti shanduko dzese dziite uye paunotanga zvakare, iwe unofanirwa kuona kuti watove neiyo nyowani vhezheni yeDevuan yakaiswa.
Mukana wekutadza kwepakeji, mapakeji akakundikana anofanirwa kugadziriswa uye wozotanga iyo gadziriso zvakare.
Vashandisi vakatama kubva ASCII uye varikushandisa upower vanofanirwa kudzikisira avo ekumusoro mapakeji kudzivirira nyaya
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Devuan 3.0 Beowulf inosvika neDebian 10.4 base, Kernel 4.19 uye nezvimwe
Zvakanakisa, ini ndichafambisa maseva angu kune iyo nyowani, nechengetedzo yakakodzera, hongu ..
Javier Ortega Conde (chiMalkavian) akadaro
Yangu desktop desktop PC ini ndinoshandisa Devuan kuyedza saka kwandiri ndiko kuburitsa kusunungurwa, ndinoramba ndichigadzirisa uye nguva ...
Pindura Javier Ortega Conde (Malkavian)